Sheekh Umal oo ka hadlay kufsiga labadii gabdhood iyo waxa ay shareecada islaamka ka qabto (DAAWO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sheekh Umal oo ka hadlay kufsiga labadii gabdhood iyo waxa ay shareecada islaamka ka qabto (DAAWO)
Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid culumadda Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ayaa si kulul uga hadlay fadeexadii kufsiga ahayd ee dhawaan loo geystay gabdho soomaaliyeed, taas oo lagu shaaciyay baraha bulshada ay ku xiriirto.
Labada gabdhood ee Soomaaliyeed ayaa dhawaan kufsi iyo dhaawacyo xun loogu geystay deegaanka Galdogob ee gobolka Mudug, waxaana maalmihii ugu dambeysay baraha Bulshada lagu faafinaayay sawiro iyo muuqaalo muujinaya kufsiga gabdhahaasi loo geystay.
Sheekh Umal oo arrinkaasi ka hadlay ayaa sheegay in wiilashii falkaasi gaystay ay waajib tahay in lagu qaado waxa ay shareecadda Islaamka ka qabto, wuxuuna dhinaca kale baaq u diray ehelada gabdhaha dhibaatada loo geystay.
Sheekh Umal ayaa ugu baaqay ehelada dhibta loo geystay inay isdejiyaan islamarkaana ay iska ilaaliyaan inay geystaan fal celis oo diinta Islaamka kasoo horjeeda.
Ugu dambeyntii, Sheekh Umal ayaa baaq u diray odayaasha iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan deeganka uu falkaasi ka dhacay, isagoona ugu baaqay inay waajib tahay in waxa ay shareecadda Islaamka ka qabto lagu qaado wiilasha falkaasi xun u geystay gabadhahaasi Soomaaliyeed.